Nantsi indlela yokukhetha izitulo zetafile yakho
Ukufumana intuthuzelo, izikali ezifanelekileyo zetafile yakho yokutyela kunye nezitulo kufuneka zihambelane.
Ukuba ulinganisa ukusuka phezulu kwetafile ukuya ezantsi, uninzi lweetafile zokutyela ukusuka ku-28 ukuya kwi-31 inches ukuphakama; Ukuphakama kwee-intshi ezi-30 yeyona nto ixhaphakileyo. Ukusuka phezulu esihlalweni ukuya ezantsi, izitulo zokutyela zihlala zisusela kwi-17 ukuya kwi-20 intshi ukuphakama. Oko kuthetha ukuba umgama phakathi kwesihlalo kunye nethebhulethi unokuba naphi na ukusuka kwi-8 ukuya kwi-14 inches.
Idinala ephakathi ifumana umgama we-10 ukuya kwi-12 intshi okona kufaneleke ngakumbi, kodwa yahluka ngokobunzima bethebhulethi, ukuphakama kweefron, kunye nobungakanani bedinala.
Ukufumana isihlalo-ukuphakama-ukuya kwetafile-ukuphakama kumgama owufumanayo, vavanya itafile (okanye iitafile) ngomxube wezihlalo ezahlukeneyo.
Sukulinganisa nje ukusuka etafileni phezulu uye esihlalweni. Ukuba itheyibhile ayinayo iapron, linganisa ukusuka ezantsi kwethebhulethi ukuya kumphezulu wesihlalo. Ukuba itafile ine-apron, linganisa ukusuka ezantsi kweapron ukuya esihlalweni.
Qaphela ukuba isitulo esinzima silukhuni okanye siphantsi. Izihlalo eziphantsi zihlala zixinene xa uhlala. Ukuba padding inkulu, uxinzelelo kunokuba lukhulu. Ukufumana ukufundwa okuchanekileyo, ulinganise ukusuka phezulu kwesihlalo esiphantsi ukuya kwisitulo ngelixa isitulo singenanto, kwaye ke umntu makalinganise kwakhona ngelixa uhleli. Yongeza umahluko phakathi kwezi zimbini kwitheyibhile ukuya kwisihlalo esifanelekileyo.
Isikali asikho malunga nokuphakama nje okuhambelanayo. Ukwafuna izitulo ezizilungeleyo phantsi kwetafile yakho.
Ixesha lokuposa: Apr-26-2020